मंगलवार हनुमान जी को पूजा गर्नुहोस नसोचेको लाभ मिल्नेछ …. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/मंगलवार हनुमान जी को पूजा गर्नुहोस नसोचेको लाभ मिल्नेछ ….
मंगलवारलाई मंगल ग्रहको दिन पनि मानिन्छ। यस दिन हनुमान जी को पूजा गर्दा सबै मनोकामनाएं पूर्ण हुन्छ । यसका लागि बेलुका सूर्यास्त पश्चात हनुमानजीको मंदिर या घरमा उन्को मूर्तिको अघि सफा आसनमा बसौ र तोरिको तेलको चौमुख दीपक जलाउ। यसको साथै अगरबत्ती, पुष्प आदि अर्पित गरौ। सिंदूर, चमेलीको तेल चढाउ। दीपक जलाउदा यो मंत्रको जाप गरौ।
मंगल ग्रहको पुजा मंगल ग्रहको आफ्नो दिन मंगलवार हो अत: मंगलवारको दिन व्रत (उपवास) राखौ र साधना पूजन गरौ भने अत्ति उतम्म हुन्छ। मंगलवारको दिन सूर्योदय भन्दा पहिले (पहले) उठेर निवृत्त भएर तन-मन लाइ स्वच्छ गरौ। त्यसपश्चात रातो रंगको नया वस्त्र धारण गरेर मण्डपमा उत्तर दिशा तिर मुख गरेर बसौ। मण्डप घरको कुनै कोठामा बनाउन सक्नुहुन्छ। किंतु फर्श कच्चि छ भने गाईको गोबरले लीपेर शुद्ध बनाउ र यदि पक्कि फर्श छ भने फर्शलाइ पुछेर तथा गुलाब जल आदि छर्केर पवित्र गरौ। आसनमा बस्नु पूर्व आवश्यक सामग्री जस्तै रातो पुष्प, रातो चंदन, कुशा, सुद्ध घी आदि तयार गरेर आफु निकट रखौ। तत्पश्चात पवित्री धारण गरेर मंत्रोच्चारण सुरु गरौ-कुनै पनि शुभ कार्य आरम्भ गर्दा समय विघ्नहरण भगवान गणेशजीको पूजा हुन्छ, जो कि समस्त विघ्नलाइ दुर गरेर साधकको साधना पूर्ण गर्नु हुन्छ
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखको दर्शन गर्नुहोस र महिमा पढ्नुहोस